Saropady ny asan’ny psychologue: mihamaro ny olona manatona « psychologue », ankehitriny | NewsMada
Saropady ny asan’ny psychologue: mihamaro ny olona manatona « psychologue », ankehitriny
Par Taratra sur 24/09/2019
Maro ny olona manatona « psychologue » eto amintsika noho ny antony samihafa, amin’izao fotoana izao, araka ny fanazavan’ny filohan’ny Holafitry ny psychologue eto Madagasikara, Andrianilaina Koloina teny Tsimbazaza, omaly. Olona nianatra manokana, nandritra ny dimy taona momba ny fahasalamana ara-tsaina, fomba fihetsika ary ny fivoaran’ny olona hahafahana manampy olona iray manoloana tranga ny psychologue. Mialoha ny hanomezana ny diplaoma, tsy maintsy nanovo fahalalana nandritra ny 500 ora sy nianatra asa, nanana fampiharana tamin’ny sampana maro ny mpianatra ho psychologue iray. Tsy manavao ny tontolo intsony izy rehefa miditra amin’ny sehatry ny asa, hoy ny talen’ny fampianarana momba ny psychologie sady psychologue matihanina, Rakotomalala Olivier.
Zavatra lehibe tandrovan’ny psychologue manoloana ny olona raisina an-tanana na ampiany ny fanajana azy sy ny fijerena ny tombontsoany amin’ny tolotra entiny. Tokony hampiasainy avokoa ny fahalalana eo am-pelatanany hanampiana ilay olona na koa marary.
23 ny psychologue vita fiofanana mpikambana ao amin’ny Holafitry ny psychologue, izay niforona ny taona 2018. Avy nandrato fahalalana tany ampita ny ankamaroan’izy ireo. Valo amin’ireo nivoaka avy amin’ny oniversite katolika UCM, mampianatra ho psychologue.
Mampiasa ny hypnose koa indraindray
Tsy vitsy ny ray aman-dreny manatona psychologue momba ny olana amin’ny fianaran’ny zanany, sy ny olana amin’ny fihetsiky ny zanany. Ho an’ny olon-dehibe, misy ireo manana olana amin’ny asa na ao anatin’ny fiainan-tokantrano na tranga mavesatra eo amin’ny fiainana andavanandro ka mila fanampiana avy any ivelany. Anisan’ny antony nametrahana ny Holafitra ny fitandrovana ny asan’ny psychologue satria saropady. Andraikitra voalohany ataon’ny psychologue ny mihaino ny olona manatona azy ary mitondra fitsaboana tsy misy fanafody amin’ny alalan’ny fanamboarana ny sain’ilay olona, mety hampiasa ny hypnose koa hahatrarana ny amparahatoka hanova zavatra. Izay no maha saropady ilay asa izay mitera-doza ho an’ilay olona raha tsy voafehy.